रूपान्तरण गर्ने कल-टु-एक्शन बटन कसरी डिजाइन गर्ने - Victor Mochere
by राजकुमार कपुर
कुनै पनि कल-टु-एक्शनको सफलता यसको डिजाइनको विवरणमा निर्भर गर्दछ। डिजाइनमा सबैभन्दा सानो परिवर्तनले पनि औसत देखिने CTA लाई अचम्मको कुरामा बदल्न सक्छ। डिजाइन तस्बिरहरूको ठूलो भागको लागि मात्र महत्त्वपूर्ण छैन तर तपाईंको साना तत्वहरू पनि यसले प्रभावित भएको छ। जे होस्, हामी मध्ये धेरै जसो सोच्दछौं र ठूला फोटो हेडरहरू, ब्यानरहरू, र राम्रो टाइपोग्राफीमा सबै ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। तर यसमा थप कुराहरू छन्।
वेबसाइटको सफलता आगन्तुकहरूले प्रदर्शन गरिरहेका कार्यहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ। किनकि वेबसाइटहरूले ग्राहकहरूको फराकिलो दायरामा पहुँच प्राप्त गर्न कम्पनीलाई मद्दत गर्दछ, वेब मास्टरहरूले उनीहरूलाई केही प्रकारका कार्यहरू लिन मन पराउँछन्। यी कार्यहरू एक न्यूजलेटरको लागि साइन अप गर्न, एक सर्वेक्षण लिन उत्पादन खरीद गर्न र यस्तै हुन सक्छ।
यो नोट गरिएको छ कि कल-टु-एक्शन बटनहरू प्रभावकारी रूपमा डिजाइन गर्दा आगन्तुकहरूले वेबसाइटसँग राम्रोसँग अन्तरक्रिया गर्छन्। CTA, यस अवस्थामा, "किन्नुहोस्" वा "साइनअप" भन्ने बटन हुन सक्छ। आकर्षक CTA बटनहरू सिर्जना गरेर, वेबसाइटको लागि यसको जिज्ञासु आगन्तुकहरूलाई ग्राहक, डोनर र ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ।
प्रभावकारी CTA बटनहरू डिजाइन गर्दा ध्यानमा राख्नको लागि यहाँ केही उपायहरू छन्।
1. आकार महत्त्वपूर्ण छ
2. यसलाई रंगीन राख्नुहोस्
3. CTA हरूलाई क्लिक गर्न मिल्ने बनाउनुहोस्
यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यदि तपाइँ तपाइँको साइट आगन्तुकहरूले साइटमा केहि प्रकारको कारबाही गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको CTA बटनहरू ठूला र देखिने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ, जुन मानिसहरूले पहिलो नजरमा देख्न सक्छन्। सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण छ। CTA बटनहरू पृष्ठमा अन्य तत्वहरूको अनुपातमा राख्दा ठूला हुनुपर्छ।
यसले मुख्य लेआउटको डिजाइनलाई कहिल्यै बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ अनुकूलन न्यूजलेटर सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसको रंग र साइज तपाइँको समग्र लेआउट संग सिंक मा हुनुपर्छ। साइज, रङ र दृश्यताको आधारमा पृष्ठमा रहेका अन्य तत्वहरूसँग CTA बटनहरूको डिजाइन समायोजन गर्न सम्भव छ।
रङले ग्राहकहरूको रूपान्तरणमा मद्दत गर्दछ र CTA बटनहरूको सफलता निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो प्रकाशमा, रंग एक धेरै महत्त्वपूर्ण छनोट हो। रंगहरू धेरै व्यक्तिहरूको लागि मनोवैज्ञानिक स्तरमा खेल्छन्। वास्तवमा, त्यहाँ केहि रंगहरू छन् जुन निश्चित संस्कृतिहरूमा बलियो हुन्छ। CTA बटनहरूलाई देखिने र आकर्षक बनाउनका लागि त्यस्ता रङ युक्तिहरू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि, कसैले सधैं अवस्थित वेबसाइट रङहरूसँग मेल खाने रङ चयन गर्नुपर्छ। रङहरू पनि साइज सन्तुलन गर्न बनाउन सकिन्छ ताकि पृष्ठमा तत्वहरू अझ बढी देखिने छन्।
यदि आगन्तुकहरूले बटनमा क्लिक गर्न असमर्थ छन् भने वेबसाइटमा CTA बटन बनाउने सम्पूर्ण बिन्दु पतन हुन्छ। वेबसाइटमा, CTA बटनको डिजाइन केवल एक डिजाइन भन्दा बढी छ। वास्तवमा, यसमा कार्यात्मक सुविधाहरू छन्। CTA बटनको प्राथमिक विचार भनेको निश्चित "मूर्त" तत्वहरू प्रदान गरेर वेबसाइटलाई जीवन्त बनाउनु हो। त्यो प्रकाशमा, बटनहरू क्लिक-योग्य देखिनुपर्छ। यसरी बटनहरू ठूला र चाखलाग्दो आकारमा राख्नुपर्छ।
कन्ट्रास्ट डिजाइन मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र जब यो CTA बटनहरूमा आउँछ यो अझ आवश्यक हुन्छ। सीटीए बटनहरू एसईओ बिन्दुबाट पनि महत्त्वपूर्ण छन्, कसैले यसलाई दुई तरिकामा विचार गर्नुपर्दछ।
बटन रङ बनाम पृष्ठभूमि रङ - यदि CTA बटनको रङ पृष्ठभूमि रङसँग मिल्दोजुल्दो छ भने, यो बेवास्ता हुन सक्छ। पृष्ठमा अन्य तत्वहरू र रङहरूसँग टकराव सिर्जना नगरी बटनलाई बाहिर खडा बनाउने विचार हो
पाठ रङ बनाम बटन रङ - तपाईले चाहानु भएको अन्तिम कुरा भनेको तपाईका आगन्तुकहरूले बटनमा रहेको पाठ पढ्न गाह्रो महसुस गरिरहेको छ। यसरी छनोट गर्नुको अतिरिक्त, पढ्न सकिने फन्ट, फन्टको उपयुक्त रङ छनोट गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। धेरै जसो एसईओ र उद्योगका डिजिटल मार्केटिङ विशेषज्ञहरूका अनुसार, बटनमा रहेका रङहरू वा जोडा बनाउन गाह्रो हुने रंगहरूबाट जोगिनै पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको CTA बटन सेतो छ र तपाईंले पाठको लागि लेमन पहेंलो रङ रोज्नुहुन्छ भने, आगन्तुकहरूलाई के लेखिएको छ भनेर बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ।
डिजाइनिङ खण्डको ख्याल गरिसकेपछि, CTA बटनलाई उपयुक्त स्थानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, CTA बटनको स्थिति पृष्ठ लेआउटमा निर्भर हुनेछ। सामान्यतया, CTA बटनहरू "फोल्ड माथि" राखिन्छन्। यो एक पुरानो अखबार शब्द हो जसको मतलब महत्त्वपूर्ण कुराहरू पहिलो पृष्ठमा वा अखबारको तह माथि हुनुपर्छ ताकि यसले अधिकतम ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ। एउटै विचार CTA बटन को प्लेसमेन्ट को लागी पछ्याउन सकिन्छ। त्यो प्रकाशमा, बटनहरू पृष्ठको शीर्षमा राखिएको हुनुपर्छ जहाँ आगन्तुकहरूले यसलाई माथि वा तल स्क्रोल नगरी तुरुन्तै देख्न सक्छन्।
NuxGame: बुकमेकर व्यवसायको लागि पूर्ण दायरा समाधान